မြန်အောင်သား: Huawei G520-5000 Root လုပ်ခြင်း
Huawei G520-5000 Root လုပ်ပုံလေးကိုပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သူက recovery image ကို flash tool နဲ့ flash လုပ်ပြီး မှ root လုပ်တဲ့ နည်းပါ။ သူငယ်ချင်းတို့ အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Download G520-5000 Recovery
1. ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးရင် zip file ကို Extract ဖြည်ပြီး 刷recovery工具.exe ကို run ပါ။
2. အောက်ကပုံထဲကပြထားတဲ့အတိုင်း scatter file ကိုထည့်ပါမယ်။ ပြီးရင် Download ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
3. ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ။ ဘက်ထရီဖြုတ်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ usb ကြိုးနဲ့ ဘက်ထရီမပါပဲ ဖုန်းကိုချိတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ဘက်ထရီတပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ flash tool လေးမှာ အနီရောင်ဘားတန်းလေး ပြေးပါလိမ့်မယ်။
အစိမ်းရောင် စက်ဝိုင်းလေးနဲ့ box လေးပေါ်လာရင်တော့ recovery ကို flash လုပ်တာ အောင်မြင်သွားပါပြီ။
4. volume + နဲ့ power ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ဖုန်းကို recovery mode ထဲဝင်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း root ဆိုတဲ့ စာသားလေးပါတဲ့ စာကြောင်းထိရောက်အောင် volume -,+ ခလုတ်တွေနဲ့ သွားပြီး power ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
ဖုန်း restart ကျပြီး ပြန်တက်လာရင်တော့ unlockroot 3.1 နဲ့ဖြစ်ဖြစ် root လုပ်လိုက်ပါ။ Unlockroot 3.1 လိုချင်သူများအောက်မှာယူပါ။
Download Unlockroot 3.1
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Sunday, April 07, 2013